Ogaden News Agency (ONA) – CWXO oo xangay iyo adeega ku gubay baabuur cadawgu leeyahay, goobo kalena ku weeraray
CWXO oo xangay iyo adeega ku gubay baabuur cadawgu leeyahay, goobo kalena ku weeraray
Posted by ONA Admin	/ March 30, 2012
CWXO ayaa kamiin iyo dabino kale duwan oo uu ugu talagalay inuu ku naafeeyo isgaadhsiinta dhulka ee cadawga ka galay wadada isku xidha Qoraxay iyo Jarar gaar ahaan agagaarka deegaanka Birqod.
Ugu horaynba waxay ciidanka JWXO 27March 2012 ka xidheen kamiin meesha loo yaqaan Xangay oo Birqod u jirta kudhawaad 10 km dhinaca waqooyi halkaas oo lagaga gubay hal Baabuur iyo dhamaan ciidankii saraa , waxa kale oo waxyeelo badan soo gaadhay Baabuur kale kaasoo ciidankii saraa uu wax dhintay iyo wax dhaawac ah noqday, mudo ka dibna laga jiiday goobtii. Maalin ka dib 28 March2012 ayay marlabaad waxay ciidanka JWXO kamiin ka xidheen meel aan sidaa uga fogayn, Birqod oo loo yaqaan Adeega halkaas oo ay ku sahaydeen hal baabuur iyo ciidankii saraa.
Dhinaca kale 25 March 2012 dabin loo dhigay kolanyo gaadiid oo maraysay agaagrka Dhagaxle ayaa waxaa dhaawac loo gaystay hal Baabuur iyadoo ciidankii saaraana ay ka dhinteen 4 askari 12 kalana ay soo gaadheen dhaawacyo halis ah
27 March 2012 weeraro lagu kala qaaday deeganada Bushle oo ka tirsan Baka iyo Duud Shariif oo ka tirsan Birqod ayaa cadawga lagag dilay 3 askari 5 kalana lagaga dhaawacay .
29 March 2012 Cadaadlay oo ka tirsan degmada Qabri-dahar ciidamada cadawga oo marayay ayaa waxaa lagu qaaday weerar sadedex jeer hal maalin, weerardan ayaa la sheegayaa inuu khasaare balaadhan ka soo gaadhay cadawga isagoo ka dib markii uu xamili waayay u soo ruqaansaday dhinaca magaalada Qabri dahar,faahfaahinta warkan uu buuxa dib ayaan ka soo sheegaynaa.
Isla taariikhdan ciidamo ka tirsan cadawga oo ku sugnaa deegaanka Balliga-cas oo ka tirsan degmada Xarshin ayaa weerar lagu soo qaaday ,haseyeeshee ciidankaas waa baqday ka dib markii ay dareemeen culayskaa waana la gaadhi waayay ,maalin ka dib 30 march 2012 ayaa ciidankii cadawga oo lagu soo xoojiyay gurmad kale waxay dib ugu soo laabteen Balliga-cas halkaas oo kamiin loosii galay ay si fiican ugu dhaceen
Wararka laga helayo dadka deegaanka ayaa sheegaya inuu soo gaadhay ciidanka cadawga khasaare balaadhan oo dhimasho iyo dhaawacba leh. dagaalkan ka dhacay Ballig- cas ayaa badalay jawigii deegaanka xarshineed iyo dadkii ku noolaa ,
Ciidanka Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya ayaa maalmahan kordhiyay duulimaadyada iyo weerarda gudaha iyo agaaraha goobaha muhiimka ah ee uu ku sugan yahay cadawgu ,iyadoo xilliga lagu jiro uu yahay mid adag oo Jiilaal ah taasina waxay mujinayasaa adadayga iyo kalsoonida Ciidanka JWXO.